Shir madaxeedka IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay - BBC News Somali
Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo ay ka soo qeyb galeen hogaamiyeyaasha dalalka Kenya, Itoobiya ,Uganda, iyo madaxweynaha martida loo ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Image caption Shir madaxeedka IGAD oo maanta Muqdisho ka dhacay
Image caption Wasiirka arrimaha dibedda Kenya, Aamina Maxamed ayaa akhrisay qoddobada lagu heshiiyay
''Meeshii aan la rabnay Soomaaliya wali ma gaarin, balse waxaan ku kalsoonnahay in dadaallo dheeraad ah ka dib ay dalkan u suurtogali doonto in xasillooni buuxda ay ku soo laabato'', sidaasi waxaa yiri Ra'iisal wasaaraha dalka Itoobiya, Hailemariam Desalegn, ahna guddoomiyaha IGAD.
War murtiyeed ay madaxdu soo saareen oo ka koobnaa 22 qodob ayaa ku baaqay in si deg deg ah lagu soo gabagabeeyo maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Hanaanka maamul u sameynta goboladaasi ayaa waxaa dhawaan la wareegay urur goboleedka IGAD.
Shirkan ayaa ka dhacay hoteel aad loo ilaaliyo oo ku yaalla agagaarka garoonka Aadan Cadde.
Lahaanshaha sawirka PPSU
Muuqaal: wadooyinka Muqdisho oo xirnaa intuu shirka socday